Wadahadalkii DF-Somalia iyo S.land oo Baaqday, FOOSIYA Yuusuf oo Qorshe Cusub sheegtay & Sida wax u dhaceen | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Wadahadalkii DF-Somalia iyo S.land oo Baaqday, FOOSIYA Yuusuf oo Qorshe Cusub sheegtay & Sida wax u dhaceen
Mar 17, 2019 - 12 Aragtiyood
Laascaanod ( Kalshaale ) Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa 13kii bishan ka sheegay dalka Imaaraadka carabta in wada-hadalladii u dhexeeyay Dawladda Dhexe iyo Somaliland loo ballansan yahay in ay ka qabsoomaan dalka Gaana ee Afrikada galbeed, Balse waxaa soo baxaya Warar sheegaya inuu Kulankaasi Baaqday.
“Ma jiro kulan ka dhici doonna dalka Gaana, taas baddalkeeda wuxuu kulanku noqon doonaa waddanka Turkiga” Sidaas waxaa sheegay Rashiid Cabdi oo ka tirsan ururka Xasaradaha Adduunka ee ICG, isagoo ka hadlayay wada-hadallada DF-Somalia iyo Somaliland.
Wargeyska Geeska Afrika ee magaalada Hargeysa kasoo baxa ayaa isaguna daabbacay in uu baaqdey kulankii loo qorsheeyay in uu ka qabsoomo dalka Turkiga, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay uu ku sugnaa Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Maxamuud Xiir (Faratoon).
Dhinaca kale Xildhibaanad Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan oo ka mid ah Golaha shacabka Soomaaliya ayaa soo jeediysay in wadahadallada Dowladda Federaalka ah iyo Somaliland lagu wareejiyo odayaasha dhaqanka.
Fawsiya ayaa sheegtay in odayaasha dhaqanka ee labada dinac la siiyo fursad wanaagsan meel ka mid ah dalka oo nabad ahna ay ku wadahadlaan, wixii ka soo baxana lagu wareejiyo siyaasiyiinta.
“Waxaan la soconaa in mar kale la wado wada hadal Somalia iyo Somaliland lagu wada hadalsiinayo dal kale.
Waxaa ka habboon in Odayaal dhaqameed culus labada garab laga keeno oo gogol loo dhigo meel dalka ah oo nabad ah muddo dheer lasiiyo kaddib siyaasiyiinta loo gudbiyo go’aanka “ Ayay Tidhi Foosiya.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in shir horudhac u ah kulanka dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland oo ka dhici lahaa Ankara uu baaqday kaddib markii waddamada UK, Mareykanka iyo Sweden ay ka caga jiideen kor joogteynta shirkaas oo la qorsheeyay in 18-ka March uu ka dhoco Ankara.
Wixii kusoo Kordha insha allahu Isha ku hay Kalshaale.com
Formaajo iyo Abiye Axmed ayaa ku soo wahan Hargeisa.
Muuse Badow waxaa lo sheegay inuu Xafiiska Ethopiya ee Hargeisa kala socdo;goorta ay imanayaan.
Muuse Badow,oo kala saari waaayay Ankara iyo Accra ayuu hadalku ku yaraaday.
Anna- weykan says:
Khudbada Muuse ma daawatay horta, wuxuuna yidhi: ” Caasimada Akra ee waddanka Gaana”, wuxuu is raaciyey magaaladii iyo wadankiiba.
Hadii uu afku ka xaday Akra isagoo ka wada Ankara, wuxuu odhan lahaa, magaalada Akra we Turkiga halkii uu ka odhan lahaa Ankara, Turkey. Fahamtu, Yaa dhidir!
Arrintaan Somali waxay i soo xusuusiday film aan waa hore fiirsaday oo ka hadlay JABHAD Ameericada Koofureed ah oo xukunki kala-wareegtay nin kaligi talis ahaa. Markay xukunki gacanta ku dhigeen ayyaa ninkii madaxa u ahaa Jabhadda oo aan waxba ka aqoon Dawladnimo wuxuu u yeertay Siyaasiyiin & Ganacsato qunyar socod ahayd oo u dhashay isla Kuwii uu xukunka ka riday oo ku yiri; “Haye Xukunki waa kane keena habki loo maamuli-lahaa” MAXAAD ka filaysaa hee Qabyo waa halkeediye. ***Hadda qofka kaliya oo Caqli & Garasho ku hartay ILAAHAY SWT ha dhowre waa Gabadhaa Fawsiyo Yuusuf X. Aaden SOO jeedinteeduna waa mid xalaala oo rajjo weyn leh hadday koox dacada hesho. §§§!!!LOP saaxiib ii daa waan ku hagoogte Ahmed Najaad. WBT
Soomaaliya inta ay riyada ku jirto wax guula oo la gaadhayaa ma jirto ? Waxaa ka haboon inaan lala kulmin soomaluya danta guud iyo ta gaarba sidaasay ku jirtaa! Jam som land wixii danaheeda ah ee dhinaca aduunka kaga xidhan ha raadsato si hudana aduunka xorta ah ha uga dhaadhiciso warkeeda? Soomaaliya way ogtahay in aduunku ogyahay inaynu laba sawladood ahayn cago jiidka dhabta ahina waa kaasi ee soomaaliya kolba meel ugu boodaysaa? Adeer aduunka maantu wuu ogyahay in somaliya qaraxyo la tiicayso xamarna gacanta ugu jirin wax wada hadalja soomaaliyada aanu jaarka nahay lagaga ordaa ma jiro
Go’aan ka soo bixi doona wadamada reer galbeedka ah oo kala ah waqoyiga america iyo yurub 120 cisho guduhood ? Inshaalla iyagaa ku cayimi doona xiligay reer galbeedku u gartaan inay qabtaan shir? Hadaanayinta ka horaysaba aqoonsan jam somland? Adeer aduunkan ilaah ka sakow reer galbeed baa u taliya waxba yaan been madaxda afrikaanku isu sheegin adeer xaqiiqadana way ogyihiin ee xiligay rabaan bay kala saaraan runtiina soomaaliyadan aanu jaarka nahay waxay la daalaa dhacaysaa xukunkeedii gudaha iyo dibadda way arkaan wadamadan shirka qabanayana reer galbeed turkiga ma ogola inay dabo fadhiistaan? Runtu waa taa adeer wadankan jaarkayaguna wuu ogyahay inaan reer yurub been loo sheegi karin sida turkiga ama carabta ama african kaoo isu wada cadawa ! Afriki isuma ogola horumar itagoo wadamada deriska ahi ay ka cadhoodeen dimoqradiyadda jam somland iyo guud ahaan qaarada afriki waxay tusaale u soo qaateen ilaa toban dal sida egpty senegal naijeria gabon evercost jabouti ethiopia uganda zinbabweiyo qaar kaloo badan waxaa kaga horaysa xoriyadda hadalka iyo votka xorta ah repoblic of somland adeer soomaaliyadan jaarkeenana waxay la daalaa dhacaysaa bay yidhaahdeen inay xamar xukunkeedu gaadho!?
Waxaan madaxda jam som land odhan lahaa company da shiidaalka iyo macdanaha soo saaraya heshiishyadoodii ha la fuliyo ? Si aynu khayraadkeenna ula soo baxno
Wada hadalka Somaliland iyo Somaliya waa iska riwaayad. Wax guul Ahna lagama gaari karo.
Ninka metelo Somaliland ama oday ha ahaado ama siyaasi ha ahaado. Wuxuu masuul ka yahay dad. Waxaa soo dirsanaayo dad isku xiran. Laakiin ninka koofur ama dowladda dhexe soo dirsato ma jiro cid uu masuul ka yahay.
Marar badan waxaan u sheegay jam somland inaanay khasab ahayn wadahadal lagu cararo ! Xamar oo caasimadda dalkan aan jaarka nahaya wali gacan uguma jirto siyaasaddiisii gudaha iyo tii debedda ayuu la daalaa dhacaysaa soomaaliyadan aynu jaarka nahay? Waxaa ka caqli badan oo kplba wax u soo jeediya dhedigeena kkkk markaad run ahaan rabtaan dhedigeenaa u gatasho ah soomaaliya iska daa labkeenoo meeshaasaad ku ordaysaan la hadalkeeda iska danaysta mr biixi yey kaaga dhegin wadahadal cami qabso wii horu mara oo dunida la macaamila qoraal baa qaramada midoobay yaala aad ku keeni kartaan shirkad kasta oo danta jam somland ku jirto maaha in jam somland madaxdeedu wakhtiga ku lumiyaan waxaan dani inoogu jirin? Aduunyadan xorta ahi iyadaa taqaan xiligay somaaliya iyo jam somland ee baraysan ay kala saarayso maaha wax ku xidhan madaxda laban dal waa jam somlandta barakaysan iyo soomaaliya? Maxaad la hadli iyagii baa badoodii lagu haystaa oo khaatiyaan taagan oo aduunyada hiil ka sugaya kkkkk indhaha fur mr biixi
Fosiya waan jeclahay. waa runteed guul iyo gobinimo. Halkas kawada waayo wadanka isimada waxkaqabankara. Idimada somali baa runta ushegi kara jegaanta inay somali a hadaan. Guul .
Garqaad, adiga & abtiga mohamed abdi jama WAA is hidda raacdeen BAL xanso inay beelaha; Ciise, Gadabuursi & Warsangeli iska daa KHAATUME raalli ka yihiin siyaasadda Muuse Adaa mar dambe soo baraarugiye sidi AQOON-YAHAN ku sheeg Xuseen Dubad. *Xuseen wuxuu gole la yimid; “Horta aan heshiino annaga (Isaaq) & idinka (Dawladda Somali) annaga & Beelaha kale waan heshiine. *Balday caqligaa ka soo maaxday maskaxdi aqoonyahinki weyna ee SNM!!!. *Oo haddaysan gòitaan rabin belaha kale ayyaguna aysan ka tanaasulayn gòitaan Muxuu taray wada hadal Isaaq & Somali?. *Hadliye isaga mawqifkiisu waa cadyahay oo wuxuu taagan yahay MIDNIMO. *C/Karim wuxu keenay midka aan anba raacsanahay oo ah; Annagoo midaysan oo reer Waqooyiya aan la xisaabtanno reer Koofur. *Arrintaan ku noqnoqo-shadeedu waa muhim si loogu dhaadhaco runti. WBT.
Reer woqooyi iyo Reer koofur.
Yaa ku haboon raadinta midnimo somaliweyn?
Ninka xukumo dhulkii woqooyi 90% iyo ninka xukumo banaadir state. yaa ku haboon midnimo raadinteed?
Mexeey Reer koofureedku isu xijiyaan midnimada ma wexey ka xigaan dadka kale?
Intii aan ku daali laheyn midnimada beenta ah een afka ka sheegano. Sow kama haboono. Marka hore dhulkii koofureed in aan mideyno?
Dad iyagu mid ah ayaa dal mideeyo.
Axmadoow indhaha hays tirin. Snm maanta koofur ka awood badan.
Dr xuseen bulxan.
Wuxuu yiri. Xusenoow beelahaas bariga dego sida dhulos iyo warsan geli xaqoodi ma helin waan kugu raacsanahay. Laakiin samaroon waxba kama maqno. Markii somali wada joogtay wexey heli jireen 2% halkaana wexey ka noqdeen xitaa madaxweyne.hadalka sidaas ayuu ula jeeday. Xitaa mar danbe ayaa lagu qabsaday waa uu faahfaahiyay.
Laakiin dee adiga neceeb isaaq ayaa kaa buuxo oo waxaa ku dhibaa noloshooda. maxaadsa ka teri ilu waa qarir.
IGA WALA GABADHAASAA KA CAQLI FIICAN OO KA ARAGTI FIICAN FARMAJO & BIIXI.
WAA GABAR ARGTI CAAFIMAAD QABTA LEH!!.